Etu esi amata ọnụọgụ kọmputa ị nyere ikike na iTunes | Esi m mac
The MacOs ndabara player nwere ọwọrọiso akụkụ na ụfọdụ adịghị ike. Ikekwe maka ọkachamara ọrụ na ọ bụghị ihe omume na ọtụtụ atụmatụ, ma n'ihi na ọtụtụ Mac ọrụ ọ bụ karịa ezuru. Otu n'ime njirimara kacha mkpa bụ ohere nke ibudata egwu ma ọ bụ ihe nkiri na Mac anyị, nke anyị nwetara na kọmputa ndị ọzọ ma ọ bụ ngwaọrụ iOS. Nbudata ọdịnaya a na Macs enwere ike. Apple na-enyere gị aka ibudata ihe dị ka kọmputa 5. Ọ dị mkpa ịmata ọnụọgụ kọmputa anyị nwere ikike na iTunes, ịgbakwunye nke ọhụrụ na listi ma ọ bụ kwụpụ ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịre ma ọ bụ nye Mac onye ọrụ ọzọ.
Chọta ọnụ ọgụgụ nke kọmputa ejikọrọ dị mfe, mana ọ zoro ezo. Ka anyị lee ebe ọ bụ:
Anyị na-emeghe iTunes. Nke mbụ, anyị ga-amalite nnọkọ na iTunes. Maka nke a, anyị ga-enyerịrị nchịkọta nhọrọ n'elu okwu ahụ akaụntụ wee pịa nbanye. Nwere ike ịbụ ihere, ma i nwere ike inwe iTunes paswọọdụ dị iche na Apple ID, buru nke ahụ n'uche.
Ozugbo anyị banyere, anyị ga-abanye ọzọ akaụntụ, na oge a pịa pịa lee akaụntụ m. Ugbu a ị ga-ahụ ozi akaụntụ niile dịka: usoro ịkwụ ụgwọ, adreesị ịgba ụgwọ, wdg.
Anyị ga-ele anya maka nhọrọ ahụ ikike kọmputa, na njedebe nke ngọngọ mbụ. Na ihe atụ, Apple gwara m na m nwere kọmputa abụọ nwere ikike. N'ihe banyere inwe kọmputa windo ikike, ọ ga-agbakwunye.
Dị ka anyị tụrụ anya tupu, ị nwere ike iwepu kọmputa ejikọrọ niile, nanị site na ịpị aka nri nke ozi ahụ. Nke a dị mma maka ikenye ìgwè ọhụrụ na ịhapụ otu ochie, ma ọ bụ mgbe ị kwụsịrị iji otu iji ree ya ma ọ bụ nye ya onye òtù ezinụlọ. Chetara gị na ọ bụrụ na ịnye ya onye otu ezi na ụlọ, ha nwere ike nweta ihe ịzụrụ ma ọ bụrụhaala na ị gbakwunye ya N’ezinụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Otu esi amata ọnụọgụ kọmputa nke enyere ikike na iTunes
Gwuo ma kuziere tebụl ịba ụba maka ụmụaka: